IPhones-ka 2020 waxay isticmaali karaan muuqaalka LTPO ee Apple Watch Series 5 | Wararka IPhone
IPhones soo socota ayaa laga yaabaa inay horeyba u isticmaalaan bandhigga "Had iyo jeer" sida Apple Watch Series 5
Toni Cortés | | iPhone
Waxyaabaha cusub ee ugu muhiimsan ee taxanaha cusub ee Apple Watch 5 uu na keenay waa shaashaddiisa cusub. Waxay isticmaashaa tikniyoolajiyad cusub oo loo yaqaan 'LTPO', oo maamusha inay hoos uga degto 60 wareeg hal ilbidhiqsi oo ah qaboojinta oo keliya 1, sidoo kale hoos u dhigaysa xoogga iyo dhalaalka midabada.
Thanks to this, waxay leedahay shaqeynta "had iyo jeer" si markaa shaashadda had iyo jeer u muuqato, iyada oo aan saameyn ku yeelan madax-bannaanida maalinlaha ah ee aaladda (aragti ahaan). Waxay umuuqataa in shaashadan cusub ee OLED laga yaabo inay kujirto iPhone-ka soo socda ee 2020.
Sida laga soo xigtay shabakada Kuuriya Elec, Apple waxay qorsheyneysaa inay u isticmaasho tikniyoolajiyadda gadaal-hoose ee awood-yar ee LTPO moodooyinka soo socda ee iPhone-ka. Diyaaraddan dambe ayaa mas'uul ka ah rogista iyo deminta pixels shaashadda shaqsi ahaan. Maqaalku wuxuu sharxayaa in shaashadan OLED lagu dhejin doono Samsung smartwatch cusub, laakiin faallooyinka ay ka bixinayso Apple looma ogaanin:
Waqtigan xaadirka ah, Apple waxay u dhaqaaqeysaa inay u adeegsato galka LTPO si ballaadhan iPhones-ka mustaqbalka. Tani waxay ka dhigan tahay inay u baahan tahay inay hesho wadooyin ay ku wada shaqeyn karaan Samsung Display, oo ah hoggaamiye dhinaca tikniyoolajiyadda iyo wax soosaarka qeybta yar iyo kuwa dhexe ee OLED.
LTPO (Heerkulka Hoose Polycrystalline Oxide) wuxuu leeyahay qaab dhismeedka TFT oo adeegsada illaa 15 boqolkiiba tamar ka yar tan LTPS (Heerkulka Heerka Sare Polysilicon), tiknoolajiyada hadda loo adeegsado shaashadaha moobiilka ee Apple. Tani waxay gacan ka geysan doontaa yareynta isticmaalka batteriga ee iPhone-yada mustaqbalka.
Taxanaha 'Apple Watch Series 5' ayaa horeyba ugu dhejinaya shaashadan 'LTPO'. Kuwa ka socda Cupertino waxay xaqiijinayaan in mahadsanid isku darida shaashadan cusub, koontaroole awood yar oo cusub, iyo shidma iftiin cusub oo muusig ah, shaashadu had iyo jeer way daaran kartaa iyadoo la ilaalinayo nolosha batteriga ee 18-ka saacadood ah.
Bandhigii ugu horreeyay ee OLED ee ay Apple dhistay wuxuu ku jiray kii hore ee Apple Watch sanadkii 2015. Laba sano kadib, iPhone X wuxuu ahaa taleefankii ugu horreeyay ee ka baxa LCD una socda OLED. Ma noqon doonto wax lala yaabo, markaa, in LTPO horeyba ugu boodayo iPhone-ka soo socda sanadka soo socda.
Haddii warkani sifiican u socdo, oo ay weheliso waafaqsanaanta shabakadda 5G, waxay noqon doonaan laba astaamood oo aad muhiim ugu ah iPhone-ka soo socda. Taasina waa bil uun ka hor in iPhone 11 cusub la bilaabay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » IPhones soo socota ayaa laga yaabaa inay horeyba u isticmaalaan bandhigga "Had iyo jeer" sida Apple Watch Series 5
Sawirro dheeri ah oo ku saabsan sida sanduuqa lacag-bixinta ee AirPods oo leh qaylo-dhaan uu noqon doono
Apple ayaa xaqiijisay ka saarista 17 barnaamij oo iPhone ah oo lagu eedeeyay "furin"